Kuunza ari monyorora itsva dzenyu dzose yemhuka Blackjack ari Hi Lo Blackjack. wedzera-iri dzinoti rinopindura bheji pamusoro kukosha kadhi yechipiri abatwe kubudikidza peanoita. Unogona kana bheji kuti unokosha kana kukosha kadhi wokutanga dzakaderera chepamusoro. Nepo izvi hazvirevi nechirongwa chaiyo mutambo, rakawedzera pamusoro winnings dzako uye ane chinokosha kwakabatsira mutambo wacho RTP uyewo.
Pamusoro Developer pamusoro Hi Lo Blackjack
Yakataurwa NYX-Realistic, Hi Lo Blackjack ari nemhaka Kudyidzana kuti mutambo dzichiri makambani maviri. The vaviri vakaungana February 2015 uye yave kupa zvakanakisisa Mobile playing mitambo kubva ipapo.
Hi Lo Blackjack kwako kwakajaira yemhuka Blackjack aine akagamuchira monyorora. Hapana kuoma pamusoro ichi wedzera-mberi. The Hi Lo bheji kuchiitwa kungoti anowedzera mafaro kuti mutambo. With zvatinosiita shop matanhatu makadhi uye vachibhejera zvinhu, mutambo anoenderera mberi sezvo imi vaizoziva. Sarudza chip zvichienderana kukosha bheji yaunoda kuisa, uyewo vachibhejera zvinhu chaunoda kutamba. amboita, yakarova kubata bhatani kutanga mutambo.
Hi Lo ndeimwe vachibhejera zvinhu unobatanidzwawo panguva Blackjack. pano, mutambi anowana mukana bheji pamusoro kukosha kadhi yechipiri zvichawanikwa vauye peanoita mushure makadhi okutanga zvaiswa patafura. ikozvino, mutambi kana ane kusarudza yakakwirira kana vakaderera, ndiko, unofanira zvokufungidzira kana kadhi wechipiri richava pamusoro kana kukoshesa kudzika pane kadhi yokutanga. Kana fembera nemazvo, ipapo iwe kuti wabhadharwa pakarepo. Mumwe richakunda chiitiko ndiko apo dzinokwana 21 runowanikwa pakati kadhi wechipiri pacharo. A Push kunoitika kana kadhi rokutanga aiva Ace, uye wechipiri rinowanikawo kuva Ace. The mutambi vacharasikirwa bheji kana kadhi wechipiri ane Ace apo wokutanga haasi, kana kana kufungidzira isiriyo.
Kana Hi Lo bheji iri pamusoro, nguva dzose bhora Blackjack Tinoenderera mberi. Kuwana dzinosvika 21 kana pedyo ndicho chinangwa mutambo.
Pamwe RTP pamusoro 99.92%, Hi Lo Blackjack zvinoshamisa shanduro dzose Blackjack. Kana uri kutsvaka mamwe kunakidzwa kwako kufarira playing mutambo, zvino izvi ndizvo mutambo kodzero vanopedzisira.